Xaasaskii & caruurtii Osama Bin Ladin oo laga masaafuriyey Pakistan (SAWIRO) – SBC
Xaasaskii & caruurtii Osama Bin Ladin oo laga masaafuriyey Pakistan (SAWIRO)
Sadexdii xaas ee uu ka geeriyooday hogaamiyihii Ururka Al-Qaacida Osama Bin Ladin iyo sideed caruur ah oo uu dhaley & hal mid uu awoowe uu ahaa ayaa saacado ka hor laga masaafuriyey wadanka Pakistaan, iyadoo lagu eedeeyey inay dalkaasi ku soo galeen sharci daro.
Xaasaska iyo Awlaada Bin Ladin ayaa tan iyo geeridiisii sanad ka hor waxaa lagu hayey dalka Pakistaan gaar ahaan guri qarsoodi ah oo amaankiisa aad loo adkeeyey oo ku yaal magaalada Islamabad ee caasimada Pakistan.
Xukun maxkamadeed oo la saarey bishii hore ayaa lagu go’aamiyey in Qoyska Bin Ladin ay sifo sharci daro ah ku soo galeen kuna joogeen wadanka Pakistan, iyadoo maxkamadu go’aan ku gaartey in loo musaafuriyo wadamadii ay u dhasheen qoyskaasi.
Dawlada Pakistan ayaa qoyska Bin Ladin u musaafurisay wadanka Sacduuiga iyadoo tani ka dambeysay wadahadalo dhanka diblumaasiyada iyo sirdoonka ku saleysnaa oo dhexmarey xukuumadaha Riyad & Islamabad taasi oo ku saleysan aayaha qoyska Bin Laden.
Haweenkii uu qabey Bin Ladin ee uu ka guuriyoodey oo kala ah Amal Ahmed Abdul Fateh oo aheyd xaaskii ugu yareyd xaasaska Bin Ladin oo u dhalatey Yemen, Khairiah Sabar & Siham Sabar oo ka soo jeeda Sacuudi Carabiya, Amal ayaa la rumayesan yahay in loo sii talaabin doono dalka ay ka soo jeeda ee Yemen halkaasi oo ay ku nool yihiin qoyskeeda.
Musaafurinta qoyska Bin Ladin ayaa ahaa hawlgal si weyn amaankiisa loo adkeeyey iyadoo loo diiday saxaafada inay wax sawiro ama muuqaal filim ah ka duubaan qoyskaasi iyadoo lagu geeyey garoonka diyaaradaha Bas muraayadaha maro looga xiray si aan sawiro looga qaadin dadka lagu safrinayo, waxaana ka dib la saarey diyaarad khaas ah oo ay dawlada Sacuudigu u soo dirtey.
Ciidamada amaanka Pakistan ayaa ku gadaamnaa baska lagu safrinayey qoyska Bin Ladin, iyadoo ilaa garoonka diyaaradaha ay Bas horey, xaga dambe iyo hareeraha ka yaacayeen gawaarida ciidamada iyo dhugdhugleyda ay Booliisku adeegsadaan.
Warsaxaafadeed ka soo baxay dawlada Pakistan ayaa lagu sheegay in 14 qof oo ka qoyska Bin Ladin ahaa loo musaafuriyey wadanka Sacuudiga, iyadoo lagu sheegay warsaxaafadeedka in dadkaasi doorteen in loo dhoofiyo Sacuudiga.
Xaasaska Bin Ladin iyo laba gabdhood oo uu dhaley oo 17 & 21 sano jir ah oo heerka da’da ay jiraan maxkamada la horkeenay ayaa qirtey in ay sharci daro ku soo galeen kuna joogeen dalka Pakistan.
Amal oo aheyd xaaskii yard ee Bin Ladin dambibaarayaasha Pakistan waxay u sheegtey in Osama uu ku noolaa dalka Pakistan ilaa iyo sanadkii 2001, isagoo hadba meel u ruqaansanayey.
Lamase oga in dawlada Pakistan ay u siisay wax fursad laamaha sirdoonka Mareykanka si ay su’aalo uga waydiiyaan joogitaankii gudaha Pakistan ee hogaamiyihii Al-Qaacida Osama Bin Ladin oo bishii May ee sanadkii hore lagu dilay halwgal qarsoodi ah oo Kumaandooska Mareykanku ka fuliyeen magaalada Abbottabad ee waqooyiga dalka Pakistan..